Kiraysiga - Idrettsrådet Stavanger
Dhammaan dabaqa hoose waxaa amaanaysan kara kullamada kooxaha ciyaaraha gudaha Stavanger bilshaah ahaan laga bilaabo Isniinta ilaa Khamiista.
Markaad nala joogto waxaad heli doontaa qolal soo jiidasho leh oo wata xiise taariikheed.
Dhismayaasha halka ee qolka wayn ee kullanka ee 70 m2, kaas oo qaadi kara ugu dhawaan, 50 qof oo leh miisas la dhigay iyo ugu dhawaan, 70 qof oo leh masrax.
Si la xidhiidha qolka kullanka waxaa jira qolka tiiifga 25 m2, kaas o os idoo kale la kiraysan karo.
Guriga sidoo kale waxaa ku jira 25 m2 kullanka/qolka kullamada oo leh miisa wayn iyo 16 kursi.
Haddii kale waxa ajira kijo yar kaas o, iyaddoo ay sababtay cabbirka, kuma habboona wax karinta, laakiin waxay ka kooban tahay tallaagad, mashiinka suxuunta dhaqa, mishiimka bunka iyo wax badan. Xaalada isku imaadka/dhacdooyin cuntadda bixinta, cuntaddan waa in la diraa.
Waxaanu haysanaa bilaydho, mindiyo, kooban iyo bakeeriyo.
Waxaanu kiraynaa dhismayaasha dhacdooyinka kala duwan sida magac u bixinta, xaqiijinaha, sanad guurooyinka, aroosyada, dhalashooyinka, kullamada bulsheed, koorsooyinka/shirarka, iwm. ee dhammadka todobaadka.
Fiinka sii diiwangashadka waxaa laha heli karaa HALKAN
Dhammaadka todobaadka/kiraysiga fasaxyada
Jimacaha saacada 3:00 galabnimo — Axada duhurka Kullanka wayn ee qolka kr. 5,750 + Qolka tiifiiga kr. 1,700
Sabti saacada 3:00 galabnimo — Axada duhurka, Kullanka wayn ee qolka kr. 5,750 + Qolka tiifiiga kr. 1,700
Kiraysiga todobaadka dhammaadkiisa
0800-1700 AMA 1700 – 2200
Kullanka wayn ee qolka kr 3 500
+ Qolka tiifiiga kr 1 700
Qolka kulanka kr 1 700
Qiimaha saacadlaha ee kullanka gaaban kr. 550
Kullanka wayn ee qolka kr 4 700
Kullanka xorta ah ee kooxaha ciyaaraha
Kooxaha ciyaarah gudaha Stavanger waxay kiraysan karaan dhismaha kullamada bilaash ahaanlaga bilaabo Isniinta ilaa Khamiista iyo nus lacagta qiimaheeda laga bilaabo Jimce ilaa Axad.
Wii xha kiraysiga dhammaadka todobaadka, deebaaji ah kr. 2,000 ayaa looga baahan doonaa, kaas oo la sii qadimayo oo ay la socoto baaqiga qiimaha kirada. Qiimaha waxaa ku jira nadiifina iyo sii diiwaaninta
ururada gobolka waxay bixiyaan kr. 750 ee kullanka qolka wayn ah iyo kr. 500 ee kullmada gudaha qolka shirka laga bilaabo Isniinta ilaa Khamiista.
Waxaanu iskaashi la leenahay Servit oo waxaanu ku talinaynaa liiskooda. Fadlan riix halkan si aad u soo gadho websaydkooda.